Madaxweynaha Jabuuti: Awoodii Al-Shabaab waa la wiiqay waxayna ogaadeen in aysan sii wadi karin dagaalka Somalia – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Jabuuti: Awoodii Al-Shabaab waa la wiiqay waxayna ogaadeen in aysan sii wadi karin dagaalka Somalia
Madaxweynaha Dalka Jabuuti Ismaacil Cumar Geelle ayaa ka hadlay Howlgalka Midowga Africa ee AMISOM ee lagula dagaalmayo ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Madaxweyne Geelle ayaa sheegay in awooddii Al-Shabaab ee Soomaaliya ay sii yaraaneyso marka loo fiiriyo waqtigii ay dagaalkooda bilaabeen ee sanadkii 2007, sida uu hadalka u dhigay xillii uu wareysi siinayey Idaacadda VOA qeybteeda afka Soomaaliga.
Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay in Al-Shabaab ay hadda ogaadeen in aysan sii wadi karin dagaalka ka dhanka ah dowladda Soomaaliya iyo Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
” 2007 ayey dagaalkooda bilaabeen, wadanka Soomaaliya inuu soo dhismayana way arkayaan, inuu kasoo kabanayo dhibaatooyinkii dhanka amniga ka heystayna way arkayaan, in ciidamada Tababar wanaagsan qaataana way arkaan, in laga gacan sareeyana way arkaan” ayuu yiri Madaxweyne Geelle.
Dowladda Jabuuti ayaa waxaa ay kamid tahay dowladaha Soomaaliya ay ka joogaan ciidamada ku howlgalla magaca AMISOM, waxana boqolaal askari oo reer Jabuuti ah ay ka howlgalaan degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan.
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa socdo muddo ka badan 10 sano, waxaana muuqata in aysan weli wiiqin awooddii Al-Shabaab inkastoo goobo badan laga saaray haddana waxay weli qeybo ka mid ah dalka wadaan weerarro iyo dilal joogto ah.